परनिर्भरताले निम्त्याएको महासङ्कट : भाषणमा हामीसँग सबै कुरा छ व्यवहारमा केही पनि छैन - लोकसंवाद
म २०४७ सालमा जन्मेको मानिस हुँ । म सानो हुँदा मेरो हजुरबुवाले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । पहिले पहिले हजुर बुबाहरूको पालामा नेपालको पैसा विदेश जान्थ्यो रे ! नेपालका धेरै उत्पादन विदेश पठाइन्थ्यो रे ! तर अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यी भनाई साँच्ची नै कथा जस्तै लाग्न थालेका छन् ।
समय परिवर्तनशील छ । प्रकृतिको नियम हो कि परिवर्तन समयको माग हो । आज बर्सौँ बिते, देशमा धेरै ठुलठुला परिवर्तनहरू भए । राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले राणा शासनदेखि प्रजातन्त्रको बहाली, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रको यात्रा !
यी सबै फर्केर हेर्दा उत्साह होइन निरासा मात्र हात लाग्छ । अथवा हामी कहाँ र कता जाँदैछाैँ । उकाली तर्फ जाँदै छौँ कि ओरोलाे तर्फ ! सोच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । मेरा हजुरबुवाको बेला र आजको समयमा यथार्थमा 'रामकहानी' बनिसकेको छ ।
नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो ।आजसम्म नेपालीहरू कहिल्यै पनि अरु राष्ट्रको उपनिवेश वा दाश हुन परेको छैन । तर विकासको कुरोमा भने हामी किन पछाडि ? नेपाली पैसाको सुनको बराबरीको भाउ थियो रे ! आज के छ त अवस्था ? अफ्सोच र आत्मग्लानि हुने गर्छ । यसको दोषी को ? जवाफ पाइरहेको अवस्था थिएन र छैन। जनताले आफैले लडेर स्थापना गरेको बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको अनुभूति गर्न नपाउँदै देश युद्धमा होमियो ।
कथित माओवादीको १० बर्से जनयुद्धको त्रास र आतङ्कको सिकार सम्पूर्ण देशले नै भोग्न बाध्य भयो । जसका कारण देश कति वर्ष पछाडि धकेलियो भन्ने कुरा कसैले पनि हिसाब राखिरहेको छ र ? १० बर्से जनयुद्धको त्रास र आतङ्क पीडित जनता शान्ति प्रक्रिया र सम्झौतासँग ठुलो आशा र अपेक्षा राखेका थिए । खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड' सँग जनताको उत्साहको कुनै सीमा नै रहेन ।
दाेषा अरूलाई दिने भन्दा आफ्नो देशमा हामी दुःख गर्न अफ्सोच मान्ने तर अरूको देशमा निम्न कोटीको काम र गुलामी किन रुचौछौ ? हामी आज निकै गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ । हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एक ढिक्का भएर राष्ट्रको प्रगतिमा अघि बढे के नै असम्भव छ र यहाँ ? तसर्थ यो महासङ्कटबाट पार लगाउन हामी सबै एक पटक एकजुट भएर आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रको लागि त्याग बलिदान गर्नु नै विकल्प छैन ।
तर अफ्सोच निराशा बाहेक जनताले केही पाएनन् । गणतन्त्रको स्थापनासँगै जनाताका आसा निरासमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् । गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गरेका जनताले भन्नु नै पर्ने भयो 'एक राजा गयो ६०० राजा आए ।' भ्रस्टचार र अनियमितता आज शासनको अभिन्न अङ्गका रुपमा मौलाएको छ । हामी कहाँ छौ, खाने चामलदेखि लिएर औषधिसम्म हामी आयात गरिरहेका छौँ । अत्यावश्यक बस्तु जस्ता तरकारीमा पनि हाम्रो परनिर्भरता बढ्दो छ ।
विकास निर्माणको काम त कता हो कता ! । विदेशी ऋणमा हामी चुर्लुम्म डुबेका छौँ । हामीसँग न शिक्षाको अवसर छ न स्वास्थ्यको । हामी भाषणमा मात्रा स्वाभिमानका कुरा गरिरहेका छौँ । तर हामी बिदेसी गुलामीमा नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ ।
राजनीतिक व्यवस्थाको उथलपुथल, सङ्घीयताको स्थापना र स्थायित्वमा अनीकन काण्डै नै काण्ड भइरहेका छन् । राज्यको उच्च स्थान र ठाउँमा रहेकाको 'रुझाइ' हुने अरूले हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था छ ।
हामी नेपाली आजको दिनमा पनि प्रतिनिधि चयनमा किन चुकी रहेका छौँ त ? किन हामी आखिरमा भ्रष्टाचारी नै रोज्छौ ? सोच्ने कुरामा अवश्य ढिला भई सकेको छ । अब हामी यसरी 'तै चुप मैँ चुप' बस्ने हो फेरी पनि जनस्तरको गुनासो गुनासोमा सीमित नहेरे पक्कापक्की छ । राष्ट्रको परिवर्तनको लागि नेपाली जनता सदैभरि 'मर्न र मार्न' तयार रहने परिवर्तनको फल निश्चित वर्गले उपभोग गर्न पाउने अवस्था छ । विकासमा हामी धेरै पछि पर्ने नै भयौं ।
हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइना र भारत आज मङ्गल ग्रहको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामी नेपाली भने दालरोटी लागि लडाइँ गर्नु परिरहेको छ । हाम्रो अवस्था कति नाजुक छ भने देशलाई चाइने सम्पूर्ण साधन, बस्तु विदेशबाट आयत गर्नु परिरहेको छ । भाषणमा हामीसँग सबै कुरा छ व्यावहारमा केही पनि छैन ।
लगाउने लुगादेखि लिएर दैनिक उपभोग्य बस्तु हामी बहिरी मुलुकमा नै निर्भर छौ, यो कहिले सम्म ? के सधैँ हाम्रो देशले यसरी नै जीवन र राष्ट्र चलाउने हो ? हामीले भावी पुस्तालाई के सन्देश दिन खोजिरहेका छौ‌- विदेशीको गुलामीबाट चलको देश अर्थात् रेमिट्यान्सबाट चलिराख्या राष्ट्र भनेर !?
लाखौँ युवाहरू बर्सेनि विदेश पलायन हुन्छन् । अवसरको कमी र नाजुक आर्थिक अवस्थाको भार बोक्न नसकेपछि मन मारेर भय नि खाडीमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । यसको दाेषा कोसेले लिनु पर्दैन र ? राष्ट्रको उच्च ओहोदा वा पदमा बस्नेलाई दिने वा स्वयं नेपाली नै यो दोषको भागीदार बन्ने ?
अन्ततः जित सत्यको हुन्छ । हामी एक भएमा यो परनिर्भरता महसंकटबाट उम्किन मात्रा होइन एक स्थापित र सफल राष्ट्रको रुपमा संसारमा चिनिन हामी सफल हुने छौँ । यही नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।